Miguel de Cervantes uye ndima dzake dzekutanga | Zvazvino Zvinyorwa
Miguel de Cervantes uye ndima dzake dzekutanga
Isu tinoziva zvikamu zvizhinji zvehupenyu hwake nezvaMiguel de Cervantes, zvisinei, dzimwe nguva hatimupe zivo yose yaanofanirwa, kugona kunyora zvakawanda nezvake uye nehupenyu hwake "hunotyisa".
Zvakawanda kunyangwe izvo zvinotendwa, Miguel de Cervantes Akange asina hunhu uye hwakanyanya hunakidze hudiki. Mhuri yake yaifamba kazhinji nekuda kwezvikwereti zvakawanda zvavaive nazvo pano neapo nekuda kwekusafambiswa zvakanaka kwababa vemhuri, Rodrigo. Amai vake, EleanorAive akawedzera "kungwara" uye achichinjika, uye ndiye akaunza mhuri kumberi pane inopfuura chiitiko chimwe chekutambudzika. Tinogona kuenderera mberi tichitaura nezvehucheche nehujaya hwaifanira kurarama nemunyori asi muchinyorwa chino tiri kuzotarisana zvakanyanya nezvanga zviri mavhesi ekutanga eCervantes uye vatine chikwereti, sezvingabvira, kuziva munyori zvakanyanya nhasi.
Mune imwe yeaya madhiri ...
Mune kumwe kwekushanya sejaya, naCervantes atove nemakore makumi maviri, ndipo paakasangana John Lopez de Hoyos, Mudzidzisi weMadrid, ane dzidziso yehumanist, uyo anga atungamira Villa Study gore rapfuura. Kunyangwe Miguel aisave mudzidzi wenguva dzose wesangano iri, sezvo makosi ake aidzidziswa kunyanya kune vechidiki vane makore gumi nemanomwe kana gumi nemasere (Cervantes akange ave kuda kusvitsa makore makumi maviri nerimwe), kuburikidza nehukama hwake naPurofesa López de Hoyos, akagadzirisa ruzivo rwechiLatin uye chiLatin zvinyorwa (Seneca, Ovid, Cicero, nezvimwewo) uyezve vakapinda mukufunga kwe Erasmus, imwe yekiyi dzekuvandudzwa kweEuropean yenguva.
El erasmism, iri pachitubu chaicho chetsika huru yakabuda muSpain pakati pezana ramakore regumi nenatanhatu, uye iyo University yeAlcalá de Henares yaive imwe yenzvimbo dzayo dzinoshanda kwazvo pakuparadzirwa kwayo. Ichi ndicho chikonzero kukosha kwemudzidzisi López de Hoyos muhupenyu hwemunyori. Yaive yekutenda kumudzidzisi mumwechete zvakare, iko nhasi sonnet irimo mavhesi ekutanga eCervantes, iyo yakanyorwa yakanyorwa.
Iwo anga asiri echokwadi uye akapenya kwazvo mavhesi.Chaizvoizvo kutaura, asi ivo vakagamuchira "kurumbidzwa" kubva kumudzidzisi, uyo panguva iyoyo aimiririra kuvhenekerwa kwevanhu zvakanyanya muMadrid. Kutenda kuna López de Hoyos, Cervantes akakwanisa kuona mavhesi ake akaburitswa aine makore makumi maviri nemaviri. Ini handingaone chero chimwe chinhu chakaburitswa chaanoshandisa makore makumi maviri gare gare,
Saka, tinogona here kutaura kuti nekuda kwemudzidzisi López de Hoyos, Cervantes akatipa mukana wekuverenga "Don Quixote de la Mancha"? Zvichida ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Miguel de Cervantes uye ndima dzake dzekutanga
Zizi, rakanyorwa naSamuel Bjørk. Chechipiri kesi yaMunch naKrüger
Rosalía de Castro, munyori weSpanish Romanticism